Xisbiga KULMIYE Oo Xaflad u Sameeyay Xubno ka Tirsanaa XAQSOOR Oo ku Biiray | Salaan Media
Xisbiga KULMIYE Oo Xaflad u Sameeyay Xubno ka Tirsanaa XAQSOOR Oo ku Biiray
Hargeysa (SM)- Masuuliyiin, Xubno ka mid ah murrashaxiintii iyo taageerayaal miisaan culus leh oo ka tirsanaa taageerayaasha urur-siyaasadeedkii hadhay ee XAQSOOR, ayaa maanta xisbiga KULMIYE soo dhawayn ballaadhan ugu sameeyey hudheelka Crown ee magaalada Hargeysa.
Xafladan siyaasiyiinta, dhallinyarada, haweenka iyo cuqaasha urur-siyaasadeedkii XAQSOOR taageeradooda ku biiriyeen xisbiga KULMIYE waxa ka soo qaybgalay Wasiirrada Caddaaladda, Diinta Aw Qaafta, Wasiir-ku-xiggeenada, Qoyska iyo Arrimaha Bulshada, Gashaandhiga, Xogyaha Guud ee KULMIYE, Xildhibaanno ka tirsan Golaha Wakiillada iyo dadweyne aad u tiro badan.
Xoghayaha Guud ee Xisbiga KULMIYE Md. Xasan Siciid Yuusuf ayaa soo dhaweeyey xubnahan siyaasiyiinta, dhallinyarada iyo haweenka isugu jira ee taageeradooda ku soo biiriyey xisbul-xaakimka, isagoo xusay in taageerayaasha urur-siyaasadeedkii XAQSOOR qaranka, xukuumadda iyo xisbiga KULMIYE u baahan yihiin, waxaannu yidhi;“Dadka reer XAQSOOR waxay ahaayeen dadkii bud-dhiga u ahaa xisbiga KULMIYE ee aasaasayaasha ahaa, waxaanay ahaayeen dadkii Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) xukunka saaray.
KULMIYE wuxuu og yahay in bulshada reer XAQSOOR yihiin cudud laxaad leh oo aan qaranku ka maarmi karin, xisbiga iyo xukuumaddu ka maarmi karin, waana hubaal in cida reer XAQSOOR la socdaan doorashada ku guulaysan doonaan, laga bilaabo maantana xisbul-xaakimka KULMIYE ayaad tihiin.”
Marwo Farxiya Muuse Ibraahim oo ahayd Guddoomiyaha garabka haweenka ee urur-siyaasadeedkii XAQSOOR, kana mid ahayd xubnaha ku biiray xisbiga KULMIYE, ayaa ugu baaqday xubnaha kale ee ka hadhay inay taageeradooda ku soo biiriyaan xisbiga KULMIYE, waxaanay xustay inay aad ugu faraxsan tahay inay cududeeda taageero ku soo biiriso xisbiga talada haya.
Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye (Nac-nac), ayaa sheegay in xubnaha ku soo biiray aanay ku cusbayn xisbiga KULMIYE, balse dib ugu soo biiriyeen taageeradoodii, waxaannu yidhi; “Markii hore KULMIYE ayaan ahaa, laakiin iminka habeen iyo maalinba XAQSOOR baan ahay ee sidaa u ogaada, waxaanad ku soo noqoteen xisbigii hooyada ahaa, soona dhawaada oo halkiinii baynu ka sii wadayna awalna KULMIYE ayeynu nahay oo aynu magac iyo muqaalba ku lahayn.”
Wasiirka Wasaaradda Caddaalada Md. Xuseen Axmed Caydiid ayaa sheegay in muddo laga shaqaynaayey sidii taageerayaasha XAQSOOR ugu soo biiri lahaayeen xisbiga KULMIYE, waxaannu soo dhaweeyey xubnahan ku soo biiriyey taageeradooda.
“Sharaf bay ii tahay inaan munaasibadan idinkala soo qaybgalo, waxaanay ahayd arrin in badan laga shaqaynaayey oo la sugaayey Ilaaha maanta isu keen kaanaybaana mahad leh waanannu idinku soo dhawaynaynaa ku soo biiritaanka xisbiga KULMIYE aad ku soo biirteen, laga bilaabana maanta cidi idinkama laha oo rag iyo dumar KULMIYE ah baad tihiin oo nafta iyo qalbigaba u sheega,” ayuu yidhi Xuseen Axmed Caydiid.
Wasiirka Caddaladu waxa uu baaq u diray masuuliyiinta urur-siyaasadeedkii hadhay ee XAQSOOR oo uu ugu baaqay in ku soo biiristooda iyo taageeradooda loo baahan yahay, waxaannu yidhi; “Urur-siyaasadeedkii XAQSOOR haddii wali cidi dambayso masuuliyiintii waxaannu leenahay walaal gacmo furan baa la idiin sii fidinaya, la idinkama maarmo, dalkuna cidna kama maarmo, KULMIYE wuxu ururinaya oo u taagan yahay midnimada dalka, waxaanan leeyahay qolada wali dambaysa isu keen keena, aan wada hadalno oo waxaad tabanaysaanba aynu ka wadahadalno.
Wasiir Wasaaradda Diinta iyo Aw Qaafta Sheekh Khaliil Cabdi Axmed oo isna halkaas ka hadlay sheegay in la soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyey taageerayaasha XAQSOOR iyo xukuumadda, tana ay mid tahay guulaha laga gaadhay daminta khilaafkaas, waxaannu yidhi; “Xukuumadda iyo xisbiga KULMIYE waa dawladiinii, wax kasta oo kala gaadhay amma hore u dhacayna waxa maanta loo jooga in la dhammaystiro, dadkii ku dhaawacmay, ku dhintay amma wax ku noqday shaqaaqadii bari dhawayd dhacday waad og tihiin in dhammaanteedba gacanta lagu hayo, qaarna xuquuqdoodii baa la siiyey, qaarna gacanta lagu haya.”
Wasiir-ku-xigeenka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Shukri Xariir, ayaa tilmaantay in taageerayaasha urur-siyaasadeedkii XAQSOOR ay qayb libaax leh ka qaateen doorashadii xisbiga KULMIYE talada dalka ku qabsaday, iyadoo soo dhawaysay xubnaha siyaasiyiinta, dhallinyarada iyo haweenka isugu jira ee quwadood taageero ku soo biiriyey.
Ugu dambayntii waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubno ka tirsan taageerayaashii XAQSOOR ee taageeradooda ku biiriyey xisbiga talada dalka haya, iyagoo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ku biiristooda, isla markaana xisbiga ka rajaynayaan inuu si fiican u soo dhaweeyo.